I-SARMS Eninzi I-BMS-564929 Umthengisi wePowder Online
/Blog/BMS-564929/I-SARMS Eninzi I-BMS-564929 Umthengisi wePowder Online
ezaposwa ngomhla 06 / 16 / 2018 by UDkt Patrick Young bha liweyo BMS-564929.
Yonke into malunga neRivaroxaban powder
1.New Sarms & BMS-564929 & CAS: 627530-84-1
3. I-BMS-564929 Ubunzima & Umsebenzi weBilo
I-4.Ienkcazo kwi-BMS-564929 powder (i-CAS: 627530-84-1)
5. I-SARMS I-BMS-564929 Umthengisi wePowder
6.Buy i-BMS-564929 powder online -AASraw?
7. I-SARMS ifowuni
Ividiyo ye-BMS-564929 powder
I-BMS-564929 powder Abalinganiswa basisiseko:
igama: I-BMS-564929 powder
I-molecular Formula: C14H12ClN3O3
Isisindo somzimba: 305.71638
Isitoreji sokugcina: Emile, emnyama kunye ne-0 - 4 ° C ngexesha elifutshane (iintsuku ukuya kwiiveki) okanye -20 ° C ixesha elide (inyanga ukuya kwiminyaka)
1. Entsha Sarms & BMS-564929 & CAS: 627530-84-1
I-BMS-564929 yindlela yokuphenya i-androgen receptor, i-CAS: 627530-84-1 kuphuhliswa nguBristol-Myers Squibb unyango lweempawu zokunciphisa amanqanaba e-age kunye namanqanaba e-androgen emadodeni ("kunye nendawo"). Ezi zimpawu zingabandakanywa ukunyanzeliswa, ukulahleka kobunzima bomzimba kunye namandla, ukunciphisa i-libido kunye ne-osteoporosis. Unyango oluneextogenone olusebenzayo lusebenza ngokumalunga nale mpawu kodwa ludibaniswa neloluhlu lwemiphumo emibi, eyona nto ibaluleke kakhulu yokwandiswa kweprotrate gland, engakhokelela kwi-prostatic hypertrophy kunye nomdlavuza wesibeletho. Oku kuthetha ukuba kukho imfuneko lwezonyango ukuba modulators receptor ukukhetha androgen, ekuthi kwezo nto kuphume iziphumo steroid kwezinye iithishu ezifana umsipha nethambo, kodwa ngokuvuselela receptors androgen kwi endlaleni.
I-BMS-564929 yenye yekhampani njengamanje kwiimvavanyo zeklinikhi zakudala, i-CAS: I-627530-84-1 yi-agonist esebenzayo ngomlomo, enamandla kwaye ekhethekileyo ye-androgen receptors (i-Ki 2.1nM, i-20x ekhethiweyo esebenzayo kwiisisiti ze-muscle ngaphezu kweprotate) kunye nokufundiswa amabuzi neenkabi BMS-564929 owawuboniswayo ukulwa ukuncipha mass kwezihlunu ekuhambeni kwexesha, kwaye xa amathamo eziphezulu nokuba ukwanda ubunzima kwezihlunu, ngaphandle kokuphazamisa ngokubonakalayo prostate tissue.It ntoni ke kakhulu ekunciphiseni amanqanaba luteinizing hormone, ngaba ngendlela emangalisayo 33x olune suppressive ngaphezu testosterone , enokuba yinkinga ekusebenziseni ukliniki yoluntu.
Iimodyuli ze-androgen ze-receptor zingasetyenziselwa ngabagijimi ukuncedisa ekuqeqesheni nasekunyuseni ukuqina komzimba kunye nokuqina, ezinokuvelisa iziphumo ezifana ne-anabolic steroids kodwa kunye nemiphumo embalwa yecala. Ngesi sizathu, ii-SARs sele zivinjelwe yi-World Anti-Doping Agency ukususela ngoJanuwari 2008 nangona kungekho ziyobisi ezivela kule klasi kodwa kusetyenziswe ukliniki, kwaye iimvavanyo zegazi kuzo zonke i-SARM ezikhoyo ziyakhiwa ngoku.
2. BMS-564929 Umda
Igama lemveliso I-BMS-564929 powder
Inani leCAS 627530-84-1
Ukungcola > 98% (okanye bhekisa kwi ISatifikethi sokuHlola)
Imiqathango Yokuthumela Ukuthunyelwa phantsi kobushushu obumgangatho obuninzi njengemichiza engabungozi. Lo mveliso uzinzile ngokwaneleyo kwiiveki ezimbalwa ngexesha lokuthumela ngokuqhelekileyo kunye nexesha elichithwe kwiDavi.
yoGcino Imeko Emile, emnyama kunye ne-0 - 4 C ngexesha elifutshane (iintsuku ukuya kwiiveki) okanye -20 C ixesha elide (inyanga ukuya kwiminyaka).
Beka ubomi kwishelufa > Iminyaka ye-2 ukuba igcinwe kakuhle
UkuPhathwa kweziMilo Esi sidakamizwa sinokuqulunqwa kwi-DMSO
3. BMS-564929 Umsebenzi wePowder & Biological
♦ I-BMS-564929 powder iyinveli, inamandla kakhulu, isebenza ngomlomo, i-nonsteroidal tissue i-androgen receptor (AR) i-modulator (Ki = 2.11 nM).
♦ IC50: 2.11 ± 0.16 nM (ixabiso le Ki), i-CAS: 627530-84-1.
♦ Iinjongo: I-Androgen receptor I-BMS-564929 powder iye yaqhubela phambili kwiinkampu zeklinikhi ukwenzela unyango lwezinto ezinxulumene nokudala. I-BMS-564929 yi-subnanomolar AR i-agonist in vitro, ikhethe kakhulu i-AR kunye namanye ama-hormone receptors, kwaye ibonakaliso ayikho into ebalulekileyo kunye ne-SHBG okanye i-aromatase.
♦ In vitro: I-BMS-564929 powder luhlobo oluphezulu lwe-AR kunye ne-Ki ye-2.11 ± 0.16 nM. Le ngqungquthela ingaphezulu kwe-1000-ngokukhethwa kwe-AR kunye no-ER? kunye, GR, kunye noM MR, kunye ne-400-fold selective with PR. BMS-564929 umgubo wawubonisa amandla (EC50, kubalwa njengoko yoxinaniso apho 50% ye kangangoko ububona of DHT iyazalisekiswa) of 0.44 ± 0.03 NM kuthelekiswa 2.81 ± 0.48 NM kulinganiswa T e C2C12 umgca yeseli myoblast le. Sample kulungiselelwa ngokusekelwe utsalo eziqinileyo-lesigaba kunye ezilandelayo LC-MS / MS ulinganiso elivunyelweyo imida silubone precisions 1-20 ng / ml, obuvakalayo interday ephakathi 2.4 kunye 13.2% naphakathi 6.5 kunye 24.2%, ngokulandelelana.
♦ Kwi-vivo: I-compound yalawulwa kwi-range ye-dose (1? G ukuya kwi-1 mg / kg) ye-8 wk kwishedyuli efanayo yokubuyisela njengoko uvavanyo lwe-2-wk. Ukwanda kwexinzelelo lwezilwanyana kwi-levator ani muscle kunye ne-prostate isisindo samanzi sagcinwa nge-BMS-564929 unyango lwe powder, nge-values ​​ze-ED50 ze-0.001 kunye ne-0.09 mg / kg ye-levator ani kunye neprotate, ngokulandelanayo.
4. Izikhokelo kwi-BMS-564929 i powder (i-CAS: 627530-84-1)
(1) Ukufumanisa i-SARM kuhlalutyo lokulawulwa kwe-doping
Iklasi ye-androgen receptor-modulators (SARMs) ekhethwe ngophando olunzulu nolwazinikiweyo kwiminyaka emibini edlulileyo. Izicelo zonyango ze-SARM zininzi kwaye zijolise ngokukodwa ekunyanga kweemeko ezibonakalayo ekulahlekelweni kwemisipha efana ne-sarcopenia jikelele, i-cachexia ehambelana nomhlaza, i-muscular dysstrophy, njl. Ngenxa yoko, ngokusekelwe kwiimpawu ze-SARM ezinama-muscle- ne-bonesbolic, la majelo enza izinto ezinokusetyenziswa kakubi kwimidlalo kwaye ngoko ke zongezwa kwi-Word Anti-Doping List (i-WADA's) Iluhlu oluVinjelwe kwi-2008. Ukususela ngoko, ezininzi iziphumo zokuhlalutya ezichaziweyo ziye zabikwa kwii-SARM ezahlukahlukeneyo, eziye zagcizelela ukubaluleka kokuthintela nokukhusela amanyathelo okuchasana nezidakamizwa ezikhulayo ezifana nalezi zinkonzo ze-anabolic, ezibonakala zingasetyenziswa kakubi kwimidlalo nangona kungekho ezi zi-SARM zange zifumene imvume epheleleyo yekliniki. Kule ngongoma, idatha yokuhlalutya kwi-SARM eyenziwe kumxholo wophando owenziweyo ngenjongo yokuvavanya iziyobisi zezemidlalo ishwankathelwe kwaye iindlela zokuvavanya kwezobugcisa ezijolise ekusebenziseni iziyobisi kunye nokuxilongwa kwe-metabolites yamanzi. Nokusetyenziswa kweziyobisi ulawulo iindlela analytical ubukhulu becala bathembele chromatography hyphenated ukuya spectrometry abaninzi, nto leyo ukuba kubagubungela ngokufanelekileyo iintlobo enkulu pharmacophores akhoyo SARMs ezifana abameli non-steroidal ACP-105, BMS-564929 yaluthuli, GLPG0492 (DT-200), I-LG-121071, i-LGD-2226, i-LGD-4033 / i-VK 5211, i-ostarine / i-enobosarm, I-RAD-140 powder, I-S-40503, njl njl kunye ne-steroidal compounds ezifana neMK-0773 kunye ne-YK-11.
(2) I-spectrometry yama-mass of hydrain-derived-and-or -gen receptor-modulators
I-N-Aryl-hydroxybicyclohydantoins ibonisa iklasi elitsha lamathambo e-anabolic akhethiweyo amathiskhi (i-androgen receptor (IiSARM)] kwaye bayathembisa imishanguzo kunye neziyobisi ezingavunyelwe kwimidlalo yamatriki kunye nezobugcisa. Ukuziphatha kokuhlukana emva kokungahambi kakuhle kunye nokuchaneka kwe-electrospray ionization (i-ESI) kunye nokuchithwa kwe-collision-induced dissociation (CID) yafundwa kunye nomgqatswa wezidakamizwa (i-BMS 564929 powder) kunye neengqungquthela ezibhalwe ngokubhaliweyo kunye ne-isotope usebenzisa isisombululo esiphezulu / i-spectrometry. ionization ezithembisayo CID wayekelela ion imveliso uphawu ngenxa cleavage ngesakhiwo hydantoin enika ulwazi malunga ngumongo proline-impiriyali kwakunye endaweni intsalela aryl kwi m / z 96 kunye 193, ngokulandelelana kwazo. I-ESI engeyiyo kunye ne-CID (MS / MS) ivelise ion iimveliso ngokubhekiselele ekulahlekeni kwamanzi kunye ne-CO (2), ekugqibeleni kwayo ibaluleke kakhulu njengoko isakhiwo se-hydantoin asiqukethe umsebenzi we-carboxyl. Ukusetyenziswa MS (n) amalinge kunye nokuzimisela echanileyo mass imodeli SARMs ezintandathu, dissociation yokubenza babe ion imveliso iimpawu ziye olucetywayo ukuxhasa ukuchongwa la machiza, metabolites zabo okanye ehlobene kwi zePCR yolawulo nokusetyenziswa kweziyobisi elizayo.
5. SARMS BMS-564929 Umthengisi wePowder
Mhlawumbi sitshitshisa umthi ongafanelekanga, kodwa sicinga ukuba siyifumene: i-SARM engaqondakaliyo yokuba ikhampani esebenzisa i-Radius i-Cambridge eyenza imvavanyo. Inkomfa yesakhiwo iboniswe kwisalathini esingezantsi. Sifumene kwiTetrahedron Letters, kwinqaku ebonisa ukuba le nto inemiphumo enamandla ye-anabolic.
Kukho ezinye BMS-564929 abaxhasi bee powder esebenza kwiiSARM kwakhona, njengeRadio. In Tetrahedron Iileta Radius abaphandi bachaza Yindibanisela yikhompawundi enegama unpronounceable (2R, 3S) 2-acid 3- (benzyloxy) 4,4,4-trifluorobutanoic acid (4,4,4-trifluoro-OBn-D-allothreonine). Kwinqaku abaphandi bakhankanya kwi-compound nje njenge-7 [cpd 7] iqhosha, eli li-molecule kwi-diagram engentla.
Uninzi lwabaxhasi be-BMS-564929 baxela ukuba i-7 iyakwazi ukusebenzisana ne-androgen receptor, ngoko bavavanya kwiiriti. I-LABC = i-levator ani muscle, umakishi wezinto ezifunwayo ze-anabolic; Iprostate = ubunzima beprotrate, ummaki weempembelelo ezingathandekiyo kunye ne-androgenic.
I-7 isebenza kangcono kune testosterone propionate, njengoko ubona. Okubangel 'umdla kukuba, abaphandi banike iigundane zihlanganiswe ngomlomo nge7 ngomlomo, ngelixa zijoyile i testosterone. BMS-564929 powder dose Banikela ngokuthobeka, kwi-SARM ubuncinane. Zonke izinto ezicatshangwayo, i-7 ibonakala ibonakala enye i-SARM, i-BMS-564929 powder, eyenziwa yi-Bristol-Myers Squibb. I-BMS-564929 i-powder dosing ibangele inkxalabo enkulu, kwaye abaphandi abaninzi bayichaza kuyo .Abathengisi abaninzi be-BMS-564929 abakwazi ukubonelela nge-BMS-564929 powder dose.
I-Radius isenza iimvavanyo nge-SARM yokuba ibhale i-RAD140. "Kungaba yinto yokuqala yokulawula i-osteoporosis, i-sarcopenias, kunye nobuthathaka obunokuguga", u-Radius uthi kwiwebhusayithi yayo.
6. Thenga BMS-564929 i powder online -AASraw
I-BMS-564929 powder iyinamandla kakhulu, i-oralally active, nonsteroidal tissue selective androgen receptor (AR). I-BMS-564929 powder yi-subnanomolar AR i-agonist in vitro, ikhethe kakhulu i-AR kunye namanye ama-hormone receptors, kwaye imibukiso ayikho into ebalulekileyo kunye ne-SHBG okanye i-aromatase. Izifundo zeempendulo ze-Dose kuma-rats ezidumiweyo zendoda zibonisa ukuba i-BMS-564929 powder inamandla kakhulu kune-testosterone (T) ekuvuseleleni ukukhula kwe-leverator muscle, kwaye ngokungafani ne-T, ikhethe kakhulu imisipha kunye ne-prostate.
Okwangoku, inani elikhulu labathengisi be-BMS-564929 balungiselela umveliso we-BMS-564929 powder. Kukho ezininzi iiwebhusayithi zokupapashwa kwiimarike, enethemba lokubamba imarike ye-BMS-564929 powder ngaphambi kwexesha. Kuyaqondwa ukuba i-AASraw, okwangoku ihlala inzuzo yezobugcisa kunye nekhwalithi, iqalile ukubonelela nge-BMS-564929 powder kwimarike . Ukufumana iinkcukacha ezingakumbi, nceda ubhekise kwiwebhusayithi esemthethweni yeAASraw.
Ukutyelela i-web yethu ye-AASraw ihleli: www.aasraw.com. Ukuba unqwenela ukuthenga i-BMS-564929 powder ngoku, yenza oku njengamanyathelo angezantsi ngalunye:
♣ Ukuqhagamshelana nathi nge-email inquiry system, okanye ummeli we-skypecustomer service (CSR).
♣ Ukusinika ubuninzi bakho kunye nekheli.
♣ I-CSR yethu iya kukunika isingeniso, ixesha lokuhlawula, inombolo yokulandelela, iindlela zokuhambisa kunye nomhla wokufika oqikelelwayo (i-ETA).
♣ Intlawulo eyenziweyo kwaye iimpahla ziya kuthunyelwa kwiiyure ze-12 (Ukuze ulandelwe ngaphakathi kwe-10kg).
♣ Izinto ezifunyenweyo kwaye zinike izimvo.
Uza kufumana umgangatho ophezulu weparm powder kunye ne-purity 98% min ngelixa elizayo!
I-AC-262356 Powder MK-2866 / Ostarine I-LGD-4033 powder
I-CAS: 870888-46-3 I-CAS: 841205-47-8 CAS:1165910-22-4
I-AC-262356 powder yi-SARM engekho ngomlomo eyenziwa ngu-Acadia Pharmaceuticals eyenza i-anabolic impembelelo i-66% enamandla njenge testosterone kwaye ine-potential malunga ne-27% njenge-androgen. Oku kuthetha ukuba i-compound ayinakuchaphazela kakhulu ubunzima iprotrate kunye ne-vesicle.
Ukufundwa kweeveki ezimbini kwiingqungquthela zendoda zifumene ukuba eli qela liyakwandisa ubunzima besisipha, njengoko kulinganiswe ukukhula kwe-ani, kunye nokuhla kwezinga eliphezulu le-LH. Amanqanaba aphakamileyo we-LH angabonisa iimvavanyo zokuziphatha ezingekho kakuhle kumadoda kunye nokungalingani kwama-hormone esinikwa ngabesifazana.
Ezi ziphumo zibonisa ukuba le ngxube inokuba luncedo kwimizi yesibini yomzimba kunye nokulawula amanye amahomoni. I-Ostarine MK-2866 powder yi-Modulator ye-Selective Androgen ye-Selection (i-SARM CAS 1202044-20-9). Yayenziwe yinkampani yezobisi ebizwa ngokuba yi-GTX ukunceda abantu ukuba balwe neemeko zokutshabalalisa imisipha. Ifezekisa umphumo wokugqibela ngokubopha i-androgen receptors yakho ngendlela efanayo neprohormones okanye i-anabolic steroids.
Kodwa inzuzo ye-ostarine kukuba iya kubachaphazela kuphela amathishu athile, ngokungafani ne-steroids. Nangona abaninzi bethu njengabantu bangenakho, ngaphakathi ngaphakathi phantse elowo kuthi siyakulangazelela ezo zihlunu ezinamandla kunye ne-abs pack pack. Nangona kunjalo, oku kuya kuhlala kuthanda ukucinga ngaphandle kokuba sivuke size senze into malunga nayo. Nangona uqeqesho, ukutya okunesondlo kunye neyona nto ifanelekileyo yeeprotheni kubaluleke kakhulu, kukho ezinye izinto ezimbalwa kufuneka ukuba ziqwalaselwe.
Kukho i-hormone ekhethiweyo kunye nama-receptors enoba isetyenziswe ngokucokisekileyo kunye ngokuchanekileyo kunokukunceda kwisakhiwo esifanelekileyo seesistim kunye nokutshisa kweoli. Umngeni omkhulu kunamhlanje amadoda amaninzi idiphozithi engafunekiyo kodwa engenakukhunjulwa. Iqala ukungaqapheli kwaye kungekudala iba yingozi enkulu. I-LGD-4033 powder, eyaziwa nangokuthi i-Ligandrol, i-VK5211, i-SARM eye yaboniswa ukuba ineempembelelo ezifanelekileyo kwisakhiwo se-muscle, ukulungiswa komzimba, ukuqhutyelwa kwezesondo kunye nokuxinwa kwethambo. Sekunzima kwizilingo zomntu, iLigandrol iboniswe ukuba ikhethe kakhulu iiseli zesisundu kunye neethambo, ngokuyininzi iyayihoxisa i-prostate okanye iiseli ezizimeleyo. Oku kwenza iziphumo zecala kwi-LGD-4033 encinci.
Ukuba ucinga ngokuthenga i-LGD-4033 powder kwi-intanethi, okanye ukuba awuqinisekanga ukuba i-LGD-4033 powder ifanelekile kwiimfuno zakho okanye awukho, kuya kufuneka ukuba ucinge ngendlela i-LGD-4033 inokukunceda ngayo, kwaye yiyiphi i-LGD Imiba emibi ye-4033 kufuneka uyikhangele. Yingakho sihlanganyela esi sikhokelo kuwe, ukuze ufunde yonke into oyifunayo ukuze ufunde i-LGD-4033 powder, kunye nokufumanisa ukuba i-LGD-4033 iya kulungelelaniswa nolawulo lwakho loqeqesho.
tags: I-BMS-564929 Powder, bathenge iBMS-564929 Powder
I-Antineoplastic Agent Monomethyl auristatin E (MMAE)	I-Platelet Aggregation Inhibitor Ticagrelor (i-274693-27-5) ithengiswa
I-dienolone powder (6218-29-7)